Casa pé na areia de manguinhos - I-Airbnb
Casa pé na areia de manguinhos
Manguinhos, Espírito Santo, i-Brazil
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ariel
Izivakashi ezingu- 7
Izilwane ezifuywayo zamukelekile
Woza uzohlala nezilwane zakho ezifuywayo.
Ukukhansela kwamahhala amahora angu-48.
Indlu enhle yokujabulela umkhosi ngesitayela!
Indlu yethu yenziwa ngezitini, izinkuni kanye nesamente.. Iphupho langempela kulabo abathanda isitayela sasemaphandleni. Izindonga ezingavamile nezingadi ezilengayo ziphula isici sendabuko futhi zilethe isimo sesimanje kuleli khaya.
Kunamakamelo amabili okulala nekamelo, ikamelo elikhulu lokuphumula elinekhishi eligcwele laseMelika (ngisho nomshini wokuwasha izitsha), kanye ne-balcony ebheke ulwandle nokubheka ukubona ukukhuphuka kwenyanga.
Esitezi sokuqala sinegalaji elimboziwe negumbi lokuphumula elinobude obuphindiwe. Ukuthuthela emzileni onamakamelo ongakwazi ukuxhumana ungaphakathi futhi. Q. I-Mar inombhede olala abantu ababili kanye ne-air conditioning, inendawo yokugezela ne-Q. Sand enombhede olala umuntu oyedwa futhi ingahlanganisa omatilasi ababili abalala umuntu oyedwa phansi. I-Q. Sol yikamelo elinombhede omkhulu.
Igceke elingemuva yindawo enhle yokudla isidlo sasemini emphemeni noma ekuseni kokuphumula ngaphansi kwezihlahla zezithelo (carambola, guava, acerola kanye ne-coconut).
Esitezi sesibili sinekhishi eligcwele laseMelika. Itafula elikhulu lokhuni eline-Cooktop lapho ungapheka khona ubheke ulwandle futhi ungakhathazeki ngezitsha!
Ikamelo lokuphumula yindawo enhle kakhulu yokuphumula nomndeni. I-TV ene-Netflix, i-YouTube ne-PrimeVideo ukuze ukhethe leyo bhayisikobho ekupheleni kosuku.
Akukho okufana nengadi enobhavu wamanzi ashisayo ukuqedela ukuhlala kwakho ngesitayela.
Ikhasi 1 kwangu-21 / 2
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, Omatolasi abangu-1
Kuyimfihlo ubhavu oshisayo
ubusuku obungu-7 e- Manguinhos
Oct 9, 2022 - Oct 16, 2022
Yakudala idolobhana lokudoba, i-Manguinhos, yakhula futhi yaba esinye sezikhungo ezinhle kakhulu zokudla. Lapha konke kungajatshulelwa ngezinyawo, ngokuhamba emigwaqweni enesihlabathi, i-promenade, noma ngisho nebhishi elinendawo yokungena kuzo zonke izindawo. Phakathi kwezindawo eziseduze yigceke lemoto (Isiteshi Sokuqala se-Manguinhos).
Ibhishi layo lihlonishwa ngokuvumelana kwalo nobuhle balo. Yazi i-Ponta dos Fachos, iphuzu lentsha yasendaweni kanye namakhorali angahlolwa ngesikhathi sokutshuza okuphansi.
I-Vila (isikhungo) iyindawo yokuhlala eyingqayizivele e-Manguinhos, esenyakatho yendawo ezungeze idolobha elikhulu. Lapha usengabona amasiko amaningi endawo: i-condo, i-capoeira nemikhosi eyenzeka unyaka wonke.
Ngaphezu kwezitolo ezifana ne-Bakery, i-Pharmacy ne-Beverage Distribider, e-Villa uzothola indawo yabadobi bendawo nabalimi, izindawo zokudlela eziningi kanye nensimbi encane kusihlwa.
Uma ufuna ukuthatha isikhumbuzo lapha, ungakhohlwa ukuthola i-Dudu ne-Damares, izingcweti zendawo (ig @artes_zion).
Ujoyine ngo-Mashi 2017
Sihlezi sitholakala nganoma yimiphi imibuzo noma izicelo futhi siphendula ku-app ngaphansi kwamahora angu-24.
Izilimi: English, Deutsch, Italiano, Português, Español
Izinga lokuphendula: 60%